यार्सा संकलन यार्सा सङ्कलनका लागि बन्दोबस्तीका सामानसहित लेक जाँदे गरेको मानिसको लस्कर । तस्विर: रासस ।
बुलबुले ताल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले तालमा सञ्चालन गरिएको डुंगामा चढेर रमाउँदै आन्तरिक पर्यटकहरु । तस्विर : ललितबहादुर बुढा सघन मकै खेती मिशन मेत अर्थात सघन मकै खेती हुने सुनसरी जिल्लाका किसानहरुले आफ्नो खेतमा उत्पादन गरेका मकै थन्क्याउनका लागि उदिनेर पारिलो घाममा मकै सुकाएको सुन्दर दृष्य । तस्वीर : रासस
घाँसको भारी अछामको मंगलसैन नगरपालिका–६ ठूलासैनमा जंगलबाट घाँसको भारी बोकेर घरतर्फ फर्किँदै महिला । तस्विर : शिवराज खत्री भारी नबोकी के खाने ओखलढुङ्गाको नवलपुरबाट सिन्धुलीको पोखरी ६ नवलपुरघाटमा ग्यासको सिलिण्डर बोकेर आउँदै दुई बालिकाहरु । तस्विर : राजन गाउँले, सिन्धुली । खरिद गर्ने है न त । गोरखाको मनकामना मन्दिरस्थित बिक्रीका लागि राखिएका हस्तकलाका सामग्रीहरु । फोटो : रासस
On Air Nepali Filmy Soft Songs
View Todays Program
सामाजिक सन्जाल बाट किन डराउछन् रातेकाइला ? मनोरञ्जन / संगीत
रातेकाइला उपनाम बाट चिनिने कलाकार सुनिल थापा औपचारीक कार्यक्रममा त्यति सहभागिता जनाउदैनन् ... द्धन्द निर्देशक चन्द्र पन्तको डिमान्ड बढ्दो, उनलाइ खोज्दै भोजपुरी फिल्मको दुइ टोलि काठमाण्डौमा मनोरञ्जन / संगीत
असार ४ , काठमाण्डौ । हलिउड मा द्धन्द निर्देशकहरुको एक वर्कसप मा सहभागिता जनाएका चन्द्र पन्त नेपाल फर्के पछि झन् धे...
मुम्बईमा लिङ्ग काटेर दुई नेपालीको हत्या
तरबारले हान्दा मामाको हात दुई टुक्रा
स्कुलबाट भागेर प्रेमिकालाई भेट्न जाँदा
अन्नपूर्ण शैक्षिक अभियान (नगरकोट)
अन्नपूर्ण शैक्षिक अभियान
आत्माहरुको सम्मान र शान्ति
Program Archive Listen
MITHA MITHA YAADHARU
चीन जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई विख्यात सांस्कृतिक इतिहासकार ज्याक्स बर्जुनले आधा शताब्दीअघि फरेन अफियर्स जर्नलमा लेखेका थ...
दक्षिण रिझाउने मनसुवा
Join Us On Facebook फेसबुक स्तम्भ यो त कस्तो भयो भने, नेपालमा अङ्रेजी शिक्षा हामीले भने अनुसार हुनु पर्छ रे।
नेपाली उपभोक्ताहरु खाना पकाउने ग्यास समेत नपाएर कुटाकुटा गर्दैछन् ।
मान्छे साथी भएन । मान्छेले साथ दिएन तर जसको कुनै शव्द थिएन उसले साथ दियो । आफ्नो भन्दा पनि कुकुरको चिन्ता थियो उनलाइ । शहर भन्दा टाढाका मान्छेको कथा झै लाग्ने पिडा Far-Western Devaki Bista
के.पि. ओली एकवर्ष प्रधानमन्त्री भै बसिरहे भने पूरै देश विद्युतमुक्त हुने पक्का छ कसैको दुईमत नहोला......
. किनकि प्रधानमन्त्री भएको ८६ दिन भएकै छैन हप्तामा ८६घण्टा बिजुली चट
लोडसेडिंग हप्ता को ८४ घण्टा रे/ नाम राख्ने बेलामा चन्द्र ज्योती राख्ने अनि सुर्य ज्योती खोजेर कहाँ पाइन्छ त झलल
ऋषि धमला मात्र अन्तरवार्ता लिदॉ जो संग नि जथाभाबि पडकिन्छन् भनेको त उनका घरमा भाको इन्भर्टर पनि उहॉ जस्तै परेछ ... टान्सफर्मर पडकेको सुनेको थिए , इन्भर्टर पडकेको सुनेको थिइन, नपडक्योस पनि किन रिषिजी को इन्भर्टर न पर्यो?...... मानबिय तथा ठूलो क्षति भएन त्यहि राम्रो , दुख ब्यक्त गर्दछू मित्र !!!
जति कराए नि काँग्रेसको कानमा बतास लाग्दैन किनकि त्यो बतास प्रधानमन्त्रीले विजुली निकाल्न भनेर कब्जा गर्नुभाछ ।
लिफ्ट लिने र दिने चलन हराएछ । "राष्ट्रवाद अभियान" पूरा भएछ सायद ।
11:22 AM - 15 March 2016
Nepali Chandra ‏
धेरै आवश्यक छ कि अधिक धन आर्जन गर्नुभन्दा अधिक जीवन बाँच्न सिकौ ।
11:18 AM - 15 March 2016
हराउने भए दुइटै हराउनु नि, जोडाको एउटै मात्र मोजा किन हराउछ होला? छ जवाफ कसै सँग!
11:17 AM - 15 March 2016
विदेशी नेतासंग खिचेका फोटा घर र पार्टी कार्यालय मा झुन्डाउने नेताज्यू हरुले आज पृथ्वी ना शाहलाइ भुल्दैछन । लाग्छ पाउ राख्ने माटो भुल्दैछन
11:57 AM - 12 January 2016
भोलीदेखि लोडसेडिङ १५ घण्टासम्म हुने भयो । बत्ति नआएपछि लोडसेडिङ आफै अन्त्य । पिएमको एक बर्षे योजना त दामी रैछ ।
12:04 PM - 04 January 2016
हेर्ने गरौ: हामीलाई जे राम्रो लाग्छ, के त्यो साँच्चीकै राम्रो छ? हामी जे गर्छौं, के त्यो साँच्चीकै उचित छ? समीक्षा र सुधार भैरहनुपर्छ।
12:02 PM - 04 January 2016
पुर्ब विशिष्ट अधिकरिहरुलाइ सम्मान सुबिधाको थुप्रो लगाएर हुदैन ।ब्याक्ती र मुलुको आर्थिक अवस्था र आबस्यकता बीच सन्तुलन खोज्नु पर्छ ।
3:59 PM - 14 December 2015